Dusan Vlahovic Oo Heshiis La Gaaray Juventus.
HomeWararka CiyaarahaDusan Vlahovic oo heshiis la gaaray Juventus.
January 19, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic ayaa lagu soo waramayaa inuu heshiis shaqsi ah la gaaray Juventus ka hor inta uusan u dhaqaaqin kooxda Serie A ka dhisan.
21-sano jirkaan ayaa ka mid ah weeraryahanada loogu doonista badan yahay Yurub, iyadoo Arsenal la rumeysan yahay inay hogaamineyso loolanka loogu jiro saxiixiisa.
Si kastaba ha ahaatee, saxafiga reer talyaani ee Giacomo Scutiero ayaa sheegay in Gunners aysan fursad u haysan inay soo dejiso Vlahovic, maadaama uu hore u ogolaaday inuu Juventus dib ugu biiro bishii October.
Scutiero ayaa sidoo kale sheegay in xiddiga heerka caalami ee dalka Serbia uu yahay ciyaaryahanka kaliya ee Juve diyaar u ah inay lacag badan kula soo wareegto bishaan ama xagaaga, halka ciyaaryahanka qudhiisa uu doonayo inuu u saxiixo Old Lady xitaa haddii ay ku guuldareystaan ​​inay u soo baxaan Champions League soo socda
Tababaraha kooxda Fiorentina Vincenzo Italiano ayaa aaminsan in Vlahovic uu wali ku sii dhiiraday in uu u ciyaaro kooxda inkasta oo uu weeraryahanka uu wax ka yar 18 bilood ka hadhsan yahay heshiiskiisa.
Vlahovic ayaa dhaliyay goolkiisii ​​17-aad ee Serie A xilli ciyaareedkan kulankii ay La Viola 6-0 kaga badisay Genoa isniintii, taas oo ka dhigan in uu la siman yahay Ciro Immobile oo Lazio ah oo hogaanka u haya tartanka loogu jiro kabta dahabka ah.
Manchester City , Manchester United , Tottenham Hotspur iyo Real Madrid ayaa sidoo kale loo arkaa inay xiiseynayaan saxiixa Vlahovic.